MARKA 10.32–45	F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 10.32–45	F. 2
NY LALANA VOASORITRA
Ho famonjena izao tontolo izao. Efa nosoritan’Andriamanitra mialoha ny fomba hanatanterahany ny famonjena izao tontolo izao. Efa voalaza tany amin’ny Genesisy 3.15 izany manao hoe: ”Dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony”. Eto Jesosy no milaza fanintelony ny hahatanterahan’io faminaniana io. Ary marihiny tsara eto ireo olona hanatanteraka izany fanorotoroana tsy roa aman-tany izany dia ireo Lohan’ny Mpisorona sy Mpanora-dalàna. Fa ny vahoaka kosa haneso sy handatsa ary handrora ny tavany.
Miditra an’i Jerosalema. Efa fantatry ny mpianany fa any ireo fahavalon’i Jesosy kanefa dia Izy mihitsy no mialoha lalana azy rehetra hiakatra ho any. Izy ireo manahy sy matahotra. Nasehon’i Jesosy ny fahavononany hiatrika ny ady mafy tsy maintsy sedrainy. Izay tena tia an’i Jesosy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany koa. (1Jaona 2.6)
Fahefana sy voninahitra. Farafahakeliny ny iray amin’izy roa ireo fa ny tena katsahin’ny olona maro dia izy roa miaraka; izany no heverin’ny olona, indrindra ny tomponandraikitra, ho zava-dehibe eo amin’ny fiainany. Izany no asehon’ny fihetsik’i Jakoba sy Jaona eto. Saingy tena mifanohitra amin’ny fomba fijerin’ny olona ny fijerin’i Jesosy fa izay te ho lehibe, hoy Izy, na izay te ho ambony dia ho mpanompon’ny hafa rehetra (43).
Jesosy Kristy no modely. Omen’i Jesosy ny teny fanentanana tokony harahin’ny rehetra manao hoe: “Fa ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro” (45). Modely tonga lafatra izany!